Majaajilayste aan ka aha Dunida iyo Maraykanka ayaa loo haysto in uu yiri “Afrika ayaa ku gulaystay Koobka aduunka | Biyoguurenews.com
Home Wararka Majaajilayste aan ka aha Dunida iyo Maraykanka ayaa loo haysto in...
Majaajilayste aan ka aha Dunida iyo Maraykanka ayaa loo haysto in uu yiri “Afrika ayaa ku gulaystay Koobka aduunka
Noah ayaa sheegay in uu warqad ka helay Mr Araud ka dib markii si kaftan ah uu ugu sheegay bandhigiisa maalinlaha ah “Afrika ayaa ku gulaystay Koobka aduunka “.
Mr Araud ayaa waxa uu warqadiisa ku yiri “ma jirto cid runta ka talaabsan karta “aqlabiyada ciyaartooyda waxa ay ku dhasheen oo ay wax ku barteen Fransiiska, wayn ku faraxsan yihiin in ay faransiis yihiin”.
“In aad ugu yeerto kooxdii Afrika , waxa ay u muuqataa in aad u diidan tahay in ay faransiis yihiin , ayuu Noah ka soo xigtay danjiraha Mareykanka u fadhiya Faransiiska.
Majaajilistahani lagu magacaabo Trevor Noah oo ka jawaabaya warqadda uga timid safiirka ayaa sheegay “dhammaan caalamka waxa ay u dabaaldagayeen Afrikaanimada kooxda Faransiiska , balse taasi dhanka xun lagama eegayn ee dhanka wanaagsan ayaa la eegayay
“Maxay tahay sababta in qofka uu haysto labo dhasho ay ugu kooban tahay oo kali ah koox gaar ah?” ayuu is waydiiyay.
Previous articleTiro kamida Xildhibaanada baarlamaanka dalka Uganda oo Kulamo la qatay Dhigooda Somaliland,
Next articleBaarlamanka Israel ayaa maanta ansixiyey sharci muran badan dhaliyey oo 70 sano Ansaxintiisu qaadatay,